आइफोन १२ः एप्पलद्वारा आइफोनका चार नयाँ मोडल सार्वजनिक, यस्ता छन् विशेषता, मूल्य यति - Khabar Break | Khabar Break
सशस्त्र द्वन्द्वका हिंसापीडित महिला भन्छन्– कहिले पाइएला न्याय ?
पूर्व प्रमुखसचिव रेवतीरमण खनालको निधन
आइफोन १२ः एप्पलद्वारा आइफोनका चार नयाँ मोडल सार्वजनिक, यस्ता छन् विशेषता, मूल्य यति
अमेरिकी कम्पनी एप्पलले उत्पादन गर्ने आइफोन संसारकै लोकप्रियमध्येको एक प्रमुख ब्राण्ड हो । मोवाइल फोनका अधिकांशलाई उपभोक्तालाई आइफोन बोक्ने रहर हुन्छ ।
तर अन्य फोन सेटहरुको तुलनामा आइफोन महंगो पनि छ । त्यसैले कतिपयले तीब्र आकांक्ष हुँदाहुँदै पनि आइफोन बोक्न सकिरहेका हुँदैनन् । यद्यपि आइफोनबारे अर्बौं मान्छेको प्रत्यक्ष चासो भने छ ।
एप्पलले १३ अक्टोरमा हुन लागेको कार्यक्रममा आइफोन १२ सार्वजनिक गर्ने भएको छ । उक्त कार्यक्रममा आइफोन सिरिजमा नयाँ ४ मोडलका आइफोन १२, आइफोन १२ मिनी, आइफोन १२ प्रो र आइफोन १२ म्याक्स सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
विगतका दिनमा सार्वजनिक हुन लागेको आइफोनको मूल्यलाई लिएर केही भ्रम फैलिसकेको छ । तर, यसको वास्तविक मूल्य थाहा पाउनको लागि सार्वजनिक कार्यक्रम पर्खनुपर्ने छ ।
पहिले फैलिएको कुराअनुसार पनि सार्वजनिक हुन लागेको आइफोनको मूल्यमा केही अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक रिपोर्टका अनुसार विभिन्न मोडलका आइफोनको मूल्य भिन्नभिन्न रहेको छ । रिपोर्टअनुसार आईफोन १२ मिनीको ६४ जिबी स्टोरेजलाई ६४९ डलर (लगभग ७५ हजार), १२८ जिबी मोडलको ६९९ डलर (लगभग ८१ हजार), र टप-अफ-द–लाइन २५६ जिबी स्टोरेजलाई ७०० डलर (लगभग ९२ हजार) पर्ने अनुमान लगाएका छन् ।
आइफोन १२ को ६४ जिबी स्टोरेजको ७४९ डलर (लगभग ८६ हजार), १२८ जिबी मोडलको ७९९ डलर (लगभग ९२ हजार) र २५६ जिबी स्टोरेज भएको आइफोनको ८९९ डलर (लगभग १ लाख ४ हजार) रुपैयाँ हुने जनाएको छ ।
त्यस्तै, आइफोन १२ प्रोको १२८ जिबी स्टोरेज भेरियन्टलाई ९९९ डलर (लगभग १ लाख १५ हजार), २५६ स्टोरेज भएकोलाई १०९९ डलर (लगभग १ लाख २७ हजार) र टप-एण्ड ५१२ जिबी आईफोनलाई १२९९ डलर लगभग १ लाख ५० हजार) रहनेछ ।
यसैगरी, आइफोन १२ प्रो म्याक्सको १२८ जिबीको १०९९ डलर (लगभग १ लाख २७ हजार), २५६ जिबीलाई ११९९ डलर (लगभग १ लाख ३९ हजार) र टप-अफ-द-लाइन ५१२ जिबीको लागि १३९९ (लगभग १ लाख ६२ हजार) मूल्य रहेको छ ।
यसमा भन्सार शुल्क जोडिएको छ । भन्सार शुल्क जोड्दा उल्लेखितभन्दा बढी मूल्य पर्नसक्छ ।
सार्वजनिक हुन लागेको आइफोन १२ मिनी ५.४ को स्क्रिन हुनेछ । दोस्रो आइफोन १२ प्रो र प्रो म्याक्सको क्रमशः ६.१ र ६.७ इन्च डिस्प्लेको साथ सार्वजनिक हुने भएको छ ।
त्यस्तै आइफोन १२ को ६.१ डिस्प्लेका साथ सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरेका छन् । साथै, सबै नयाँ आईफोन मोडल्सको नयाँ ए १४ बायोनिक चिपसेटका साथ आउने जनाएको छ । जुन एप्पलको हुने कार्यक्रममा टाइम फ्लाइजमा सार्वजनिक भएको थियो ।
यसका साथै एप्पल निजको आकार घटाउन र फ्लैटर एजको आइप्याड प्रो जस्तै डिजाइन पेश गर्नेको लागि तयारी रहेको छ । आइफोन १२ मिनीबाहेक सबै आईफोन १२ मोडल ५ जी कनेक्टीभिटीमा पाउने भएको छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा
यस्तो छ दशैंमा मासु पकाउने तरिका
चार वटा खुट्टा भएकी यी महिला, जसले जन्माइन् पाँच सन्तान !
कोरोना भाइरस : यौन सम्पर्क गर्दा सङ्क्रमण सर्छ कि सर्दैन ?
लामखुट्टेले कस्ता मानिसलाई बढी टोक्छ ? जानी राखौं
यसकारण बेलुकाको खाना चाँडै खानुहोस्
१२० पत्नीका यी पति
शारिरीक सम्पर्कपछि महिलाले पार्टनरबाट के चाहन्छन ? जानी राखौं
हाँस्ने शैलीबाटै थाहा हुन्छ मान्छेको स्वभाव, तपाई कस्तो हाँस्नुहुन्छ ?
यी हुन विश्वकै सबैभन्दा लामो खुट्टा भएकी युवती
शरीरमा निलो दाग देखापर्दा बोक्सिले चुसेको भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ? यस्ता छन् कारणहरु
मकवानपुरगढीमा विकासले फड्को मार्दै, तीन वर्षमा एक दर्जन पक्की पुल निर्माण
असहायलाई दशैँ राहत
मकवानपुरमा सक्रिय संकमितको संख्या ८ सय ३३ जना
बेलायतमा एकैदिन ३६७ को मृत्यु, २३ हजार संक्रमित, मृत्यु हुनेको कुल संख्या ४५ हजार ३६५